Zviga zvebvumirano - WebM.to
WebM kune MP4
WebM kune MP3
Pazasi pane dudziro ine hukasha yemazwi edu echirungu uye echirungu zvakavanzika zvemitemo zviri zviviri zvinoshanda chete muChirungu
Nekuwana iyo webhusaiti pa https://webm.to , urikubvuma kusungwa nemitemo iyi yebasa, mitemo yese nemirau, uye unobvuma kuti ndiwe une basa rekuteerera chero mitemo inoshanda yemuno. Kana iwe usingabvumirane nechero yeaya mazwi, unorambidzwa kushandisa kana kuwana saiti ino. Zvishandiso zviri mune ino webhusaiti zvinodzivirirwa nemutemo unoshanda wekopiraiti uye chiratidzo.
2. Shandisa License
Mvumo inopihwa kurodha pasi imwe kopi yezvinhu (ruzivo kana software) pawebhusaiti yeWebM.to kune wega, asiri ezvokutengeserana ekuona chete. Uku ndiko kupihwa rezinesi, kwete kuendesa zita, uye pasi peiri rezinesi haugone:
gadzirisa kana kuteedzera izvo zvigadzirwa;
shandisa izvo zvinoshandiswa kune chero chinangwa chekushambadzira, kana kune chero ruzhinji kuratidzwa (kushambadzira kana kusiri kushambadzira);
kuyedza kuumbiridza kana kudzoreredza mainjiniya chero software irimo pawebhu yeWebM.to;
bvisa chero copyright kana zvimwe zvivakwa zvekupokana kubva muzvinhu; kana
chinjana izvo zvinhu kune mumwe munhu kana 'girazi' izvo zvinhu pane chero imwe server.
Iri rezinesi rinobva ramisa wega kana ukatyora chero yeiyi marambidzo uye inogona kumiswa neWebM.to chero nguva. Paunomisa kuona kwako zvinhu izvi kana kugumisirwa rezinesi iri, unofanira kuparadza chero chinhu chakakoswa mumawoko ako mungave mumagetsi kana akadhindwa fomati.
Izvo zvinoshandiswa pawebhusaiti yeWebM.to zvinopihwa pane 'sezvazviri' hwaro. WebM.to haigadziri warandi, inoratidzwa kana kurehwa, uye izvi zvinoramba uye zvinokanganisa zvimwe zvese zvimisikidzo zvinosanganisira, pasina muganho, zvinoreva garandi kana mamiriro ekutengesa, kugwinya kwechimwe chinangwa, kana kusaputsa midziyo yehungwaru kana kumwe kutyorwa kwekodzero.
Kupfuurirazve, WebM.to haitenderi kana kuita chero chinongedzo maererano nekururama, zvingangoitika mhedzisiro, kana kuvimbika kwekushandisa kwezvinhu zviri pawebhusaiti yazvo kana zvimwe zvine chekuita nezvinhu zvakadaro kana pane chero masaiti akabatanidzwa kune ino saiti.
Hapana chiitiko WebM.to kana vanopa vayo vanova nemhosva kune chero kukuvara (kusanganisira, pasina muganho, kukuvara kwekurasikirwa kwedata kana purofiti, kana nekuda kwekukanganisa bhizinesi) kunobva mukushandisa kana kusakwanisa kushandisa izvo zvinhu paWebM.to webhusaiti, kunyangwe WebM.to kana WebM.to mumiriri ane mvumo akaziviswa nemuromo kana mukunyora nezve mukana wekukuvara kwakadai. Nekuti mamwe masimba haatenderi kutapudzwa pamawaranti anotaurwa, kana kusakwana kwemutoro wekukuvara kwakakomba kana kwakangoitika, izvi zvisingakwanisike kwauri.
5. Kururamisa kwezvinhu
Zvinhu zvinoonekwa pawebhusaiti yeWebM.to zvinogona kusanganisira kukanganisa kwehunyanzvi, typographic, kana mifananidzo. WebM.to haitenderi kuti chero zvigadzirwa zviri pawebhusaiti yacho zviri chaizvo, zvakakwana kana zvazvino. WebM.to inogona kuita shanduko kune izvo zvinhu zviri pawebhusaiti yayo chero nguva pasina ziviso. Nekudaro WebM.to haiite chero kuzvipira kugadzirisa zvinhu.
WebM.to haina kuongorora ese masaiti akabatanidzwa kune yayo webhusaiti uye haina mhaka yezviri mukati mechero rakabatana nzvimbo. Iko kuiswa kwechero chinongedzo hazvireve kubvumidzwa neWebM.to yeiyo saiti. Kushandiswa kwechero rakabatana webhusaiti kuri panjodzi yemushandisi.
WebM.to inogona kudzokorora aya mazwi ebasa kune webhusaiti yayo chero nguva pasina ziviso. Nekushandisa ino webhusaiti urikubvuma kusungwa neiyo yazvino vhezheni yeiyi mazwi ebasa.
8. Mutemo Unodzora
Aya mazwi nemamiriro ezvinhu anotongwa uye akaumbwa zvinoenderana nemitemo yeConnecticut uye unoendesa zvinonzwisisika kune masimba ega ematare muHurumende kana nzvimbo iyoyo.
Chinja kubva paWebM
WebM kune Vhidhiyo
WebM kune AVI
WebM kune MPEG
WebM kune MOV
WebM kune MPG
WebM kune WebM
WebM kune MPEG-2
WebM kune FLV
WebM kusvika 3GP
WebM kusvika M4V
WebM kusvika M3U8
Sravana Sameeralu Serial 4th Audio
WebM kune Audio
WebM kune WAV
WebM kusvika M4A
WebM kusvika MP2
WebM kune OGG
WebM ku AC3
WebM ku AMR
WebM kune OPUS
Chinja kune WebM
AVI kune WebM
WMV kuenda WebM
MOV kuenda WebM
MPEG-2 kune WebM
FLV kuenda WebM
VOB kuenda WebM
Audio kune WebM
MP3 kune WebM
WMA kune WebM
AIFF kune WebM
OGG kune WebM
AMR kune WebM
DTS kune WebM
OPUS kune WebM
GIF kune WebM
WEBP kune WebM
WebM kune ZIP
3,605 shanduko kubvira 2020!
Yakavanzika Mutemo - Zviga zvebvumirano - Taura nesu - Nezvedu - API
Yakagadzirwa na nadermx - © 2021 WebM.to
Iwe wapfuura yako yekutendeuka muganho weawa imwe paawa, unogona kushandura mafaera ako mu 59:00 kana Saina kumusoro uye shandura izvozvi.
Kuva PRO kunokupa izvi maficha
🥇 Kwete Ads
☝ Shanduko dzisina kumanikidzwa
🥇 Mafaira anosvika zana Gb inoshandura
🐱 Mutsetse wekutanga
🚀 Feature Kumbira Sarudzo
☝ Batch kurodha kuitira kuti iwe ugone kudhonza uye kudonhedza seakawanda mafaera panguva imwe pane rimwe nerimwe